I-Semalt - Indlela Yokuvikela Ibhizinisi Kusuka ku-CryptoLocker I-Malware Attack?
Abahlaseli nabahlaseli bebelokhu benza izingqinamba ezibalulekile endleleni yabo yokusebenza njengoba izitayela nezinqubo eziqhubekayo ziqhutshwa ku-SEO. Amasu namathuluzi asetshenziswe ngaphambilini ukuvimbela i-malware ekuhlaseleni amawebhusayithi namabhizinisi ase-inthanethi okwamanje ayisebenzi. Igciwane leThrojani liye lalingenye ye-malware eyasakazwa kumawebhusayithi okugcina abasebenzisi.
U-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , ubheka imibono ephathekayo yokuthi ungahlala kanjani uphephile kusuka ku-malware.
Kunezici eziningi eziye zafakwa phambili ukuvikela abasebenzisi bokugcina bekhompiyutha ekuhlaselweni okusosizini, beqaphele lapho usebenzisa i-intanethi yomphakathi nalapho belayisha isofthiwe yamahhala ku-intanethi ikhuthazwa. Ukuze ugweme ukuhlaselwa ngumhlaseli ononya, ukulanda nokufaka i-premium anti-malware kuyimfuneko ebalulekile. Ama-anti-virus akhona mahhala futhi atholakala kalula ku-intanethi, kodwa isofthiwe ye-premium inezinzuzo ezongeziwe uma kuqhathaniswa nezinhlelo ezijwayelekile kanye nezinhlelo ze-premium.
I-Ransomware, eyaziwa nangokuthi i-CryptoLocker, iye yathinta amabhizinisi amaningi e-intanethi manje, isimo esithumele amafemu amaningi engozini yokusebenza. I-CryptoLocker virus ibhekwa njengeqhinga le-malware eliye lasakazeka ekugcineni izinhlelo zezokuphepha zokusetshenziswa kwabasebenzisi bekhompyutha ngaphandle kwemvume yabo.
Kungani igciwane le-CryptoLocker lihlukile kwabanye?
Ukuba igciwane emndenini weThrojani, i-Ransomware isebenza ekusakazeni ku-PC yakho ngokuphula amakhodi wokuphepha wesistimu. Emva kokufakwa kukhompyutheni yakho, i-CryptoLocker ivumela ukungena kwezinye izinhlobo ze-malware ezifana ne-Trojan virus..I-CryptoLocker ingenye yezinhlobo njengoba ifuna inani elithile lama-dollar ngemva kokulawula ngokugcwele kwe-PC yakho.
Abahlaseli bezinkokhelo banquma ukuthi bazobuya nini ulwazi lwakho oluyimfihlo kanye neziqinisekiso emva kokufaka i-malware ku-PC yakho. Ngokuyinhloko, abahlaseli babuyela imininingwane yakho yekhadi lesikweletu namaphasiwedi e-akhawunti kuwe ngemuva kokukhokha imali efunwa.
Indlela yokuvimbela igciwane le-CryptoLocker elingathinti iwebhusayithi yakho
Izibalo zinezinkampani eziningi eziphuma ebhizinisini ngenxa yokukhwabanisa nokusebenzisa imali eningi ukukhokha abaduni. I-Securence, inkampani yenkampani yokuphepha ephephile, iye yaba phambili ukulwa nabaqaphi nabangasebenzi be-malware ekusakazeni kumawebhusayithi ebhizinisi ngokunikeza izixazululo eziphezulu. Inkampani ye-Securence inikeza izixazululo zezokuphepha kwiwebhusayithi ngokuhlunga ama-imeyili ogaxekile futhi usebenzisa izinguqulo zakamuva ze-malware namathuluzi okuvimbela i-malware engakuthinti.
Inkampani ye-Securence iphinde isebenze ukuqinisekisa ukuthi amakheli e-IP ekuthumelele ama-imeyili aphephile futhi asebenzisa ubuchwepheshe bamuva bokuthi ama-schedule ahleliwe ngesikhathi sokuhlola ukuthola izinsongo ne-malware. Ngokusho kochwepheshe be-Securence, abaduni bafinyelela kubasebenzisi be-PC besebenzisa amafayela agcinwe. Amafayela asobo yomlando asetshenziselwa ukusabalalisa i-CryptoLocker kumawebhusayithi namaqhinga ezinhlangano.
Kungani uzivikela ku-CryptoLocker?
Ukuphepha kwakho kwe-intanethi kubaluleke kakhulu. Izindlela eziningi ezishintshayo ngenxa yezinto ezintsha kanye nobuciko ngenxa yemizamo yabaduni. Ukuhlaselwa kwe-Malware kuye kwaholela ekuvalweni kwebhizinisi ngenxa yokuhlupheka kokulahlekelwa minyaka yonke. Ukuhlaselwa kwe-Malware kubhekwa njengokubulalayo uma kuqhathaniswa negciwane leTrojan kanye nokuhlaselwa kweselula. Into enhle ukuthi, ochwepheshe nabachwepheshe be-IT banendaba njengoba beye bahlakulela izinguqulo ezintsha ze-anti-malware ukuvikela amabhizinisi ekulahlekelweni kokulahlekelwa.
Ukuze ugweme ukuhlukunyezwa ngabahlaseli abanonya, udinga ukusebenzisa izinguqulo zakamuva ze-software kanye ne-CryptoLocker Anti-malware ukuvimbela ama-virus amasimu ekuthinteni amabhizinisi akho. Akudingeki uhlupheke njalo njalo ngonyaka. Hiring ochwepheshe ukuphatha ukuphepha kwewebhusayithi yakho futhi uvimbele i-malware namagciwane okuthinta ukusebenza kwebhizinisi lakho le-intanethi Source .